Telepoorteeshin: Yaada asoosamaa kalaqa dhugaatti geeddarame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Tarii namni iddoo hanga ammaa deemamee hin beekne deemuu danda'uufi laata?
Saayintiistonni Chaayinaa mala telepoorteeshin jedhamutti fayyadamuun waan xinnoo (particle) ifaa lafarratti argamu saataalaayitii fageenya kiloomeetira 1,400 irra jirtu irratti bifa carallaatiin akka mul'atu gochuu danda'aniiru.
Teekinooloojiin kun kanaan dura asoosama saayinsii fi fiilmiiwwan keessatti malee qabatamaan mul'atee hin beeku. Haa ta'u malee haala kanaan namoonni mana isaanii taa'anii bifa carallaatiin iddoo hojiisaanii yookin iddoo bashananaatti argamuu ni danda'u jechuu miti.
Telepoorteeshiniin attamiin hojjeta?
Gabaabumatti telepoorteeshiin jechuun wanti tokko qaamaan bakka tokko osoo jiruu, iddoo biraatti akka mul'atu gochuu dha.
Ogeeyyiin fiiziksii tokko tokko telepoorteeshiiniin fakkeenya maashinii faaksiitiin wal fakkeessu. Kunis faaksiin waraqicha osoo hin taanee ergaa waraqaa sana irra jiru erga jechuudha. Maashinni faaksii ergaan itti ergamees ergicha waraqaa biraarratti maxxansuun baasa.
Goodayyaa suuraa Maashinii Faaksii
Kanaafuu, telepoorteeshiniin wanti tokko battaluma sanatti iddoo biraatti akka argamu gochuu miti jechuu dha.
Kalaqni Chaayinootaa kun maaliidha?
Saayintiistonni Chaayinaa kutaa qorannoo isaanii kan Tiibeet keessatti argamurraa wantoota-xixiqqoo yookin paartikiloota 4,000 kan tokkoon tokkoo isaanii cimdii ta'an erga omishanii booda cimdiiwwan keessaa paartikilii tokko hambisuun isa tokko qofa gara saatalaayitii Miishiyaas jedhamutti karaa carallaa ifaatiin ergan.
Saatalaayitichis teekinooloojii irratti hojjatametti gargaaramuun paartikiloota lafaa ergaman ofitti harkisuun akka mul'atan godha. Gabaasni toora intarneeti irratti barreefame, mala teeleporteeshiniin wanti tokko fageenya amma kanaa irratti akka mul'atu gochuun isaanii kun isa jalqabaati.
Goodayyaa suuraa Saatalaayitin Miishiyas paartikiloota lafarraa gad lakkifaman haalaan ofitti harkisuu danda'a
Yunivarsiitii Veenaatti piroofeesara kan ta'e, Aantoon Zeelingaar, yaaliin kun yaalii cimaa akka ta'ee fi milkaa'inni kun bifa kanaan saffisaan ni argama jedhee eegaa akka hin turre dubbateera.
Dhala namaa mala telepoorteeshinii kanaan bifa carrallaatiin iddoo biraatti kan hin geessine erga ta'e maaltu isa adda taasiseree jechuun keessan hin olu ta'a. Dhali namaa bifa carrallaatiin iddoo biraatti akka mul'atu gochuun danda'amuu baatullee kalaqani kun networkii quunnamtii hin basaasamne uumuu keessatti gumaacha olaanaa qabaata jedhaniiru.
Har'a paartiikiloota bakka tokko jiran bakka biraatti akka argaman gochuun yoo danda'ame, tarii fulduratti nama mana isaa jiru bakka hojii isaatti akka argamu gochuun danda'amuu mala.